Al-Shabaab oo hurinaya dagaalka Marko
Topnews:-Al-Shabaab oo hurinaya dagaalka Marko iyo warar kale
29 March 2013 Waagacusub.com-Al-Shabaab ayaa ka faa-iideeysanaya fursada uu bixiyey Raisul wasaare Saacid xili uu Marko booqasho ku tagay , xiligaas oo uu odoyaasha beelaha deegaanka uu guud ahaan u sheegay inay la yimaadaan 100 maliishiyo ah oo qeyb ka noqota sugida amniga Magaalada Marko, soo jeedintaas ka timid xukuumadda Soomaaliya ayey Al-Shabaab u arkeen fursad ay ku dhex geli karaan ciidanka dawladda si sahlan, maadaama ay magaalada Marko haysan jireen in ka badan 4 sanadood. Alshabaab oo si dadban u xukuma odoyaasha dhaqanka meelaha laga xoreeyay ayaa ku guuleystay inay magaalada ku soo aruuriyaan maliishiyaad hubaysan oo iyaga ah balse arintaas waxaa caqabad ku noqday beelihii kala duwanaa degaanka oo ku heshiin waayey inay qeybsadaan 100 ciidanka ah oo Raisul wasaaraha Soomaaliya Saacid u balan qaaday inuu xafiiskiisu mushaar siin doono.
Maliishiyaadka Alshabaab oo haatan gashan shaar beeleed ayaa si buuxda u jooga xaafad kamid ah xaafadaha Magaalada Marko, waxayna bilaabeen inay isbaarooyin dhigtaan wadooyinka soo gala Magaalada Marko.
Al Shabaab oo aad ugu taqasusay hurinta colaadaha beelaha dhexdooda, ogna rabitaanka beelaha kala duwan ee Soomaaliya ayaa ka dhaadhiciyeen mid ka mid ah beelaha degan Marko inay la wareegaan magaalada , iskana xoreeyaan beelaha kale oo ay ku sheegeen soo galootiga.
Alshabaab wuxuu qorshaheedu yahay inay sii huriso dagaal beeleedyada iyada oo la sheegay inay malishiyaadka beesha Biimaal ku kordhiyeen Ciidan iyo saanad milatari, iyaga oo ku dhiiriyey in weerar la beegsadaan saraakiisha iyo shaqsiyaadka muuqda ee beel kamid ah beelaha Soomaaliya.
Hirgelinta Mashruucaan ayaa la sheegayaa in horjoogaha Shabaab Axmed Godane uu u xilsaaray Sahal Iskudhuuq, Xuseen Xaaji Cabdi (Awgaab) iyo Cabdi Muuse. Masuuliyiintaan ayaa la sheegayaa inay xiliyada habeenkii yimaadaan xaafadaha ciidan beeleedka milan la dejiyey.
Sidoo kale dagaaladaan ayaa la sheegayaa hurintooda inuu qeyb ka yahay ninka sheegta Madaxweynaha udubland Ibrahin Cabdullaahi Cadow iyo siyaasiyiin kale oo beesha ah waayeyna Xildhibaanimo ay quud daraynayeen iyagoo haatan ku sugan Magaalada Muqdisho. Ibrahin Cabdulahi Cadow oo ka yimid dalka Maraykanka ayaa noqday nin shaqo ka dhigtay in la dilo qof kasta oo kamid ah beelaha uu ku sheego inay qabsadeen Marko.
Website-yada Alshabaab ee somalimemo ,amiirnuur iyo idaacada anduluus ah ayaa ah kuwo si isdaba joog ah u baafiya una buunbuuniya dagaalada maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayey Magaalada Markoiyo agagaaraheeda.
Xilka qaadis lagu sameeyay Masuuliyiintii Magaalada Marko ee abuuray Dagaalada Qabaa’ilka.
Shalay ayaa waxaa Magaalada Marka tegay wafti uu hogaaminayo Wasiir ku xigeenka arrimaha Gudaha Dawlada Somaaliya Jaamac, Waftiga wasiir ku xigeenka ayaa isugu yeeray dhamaan odoyaasha Beelaha Degmada Marko, odoyaashaa ayaa ka koobnaa Beesha Banaadiriga , Beesha Digil iyo Mirifle, Beesha Dir iyo Beesha Hawiye.
Shirkaas ayaa la isku wareestay waxyaalihii ugu danbeeyay ee Marka Ka dahacayey, waxaa jiray Cabashooyin ay kala sameeyeen odoyaashii u kala hadlayey beelaha degan magaalada Marka.
Beesha Dir oo ay u hadleen odoyaal kasoo jeeda beesha Biimaal, odoyaashaas oo ay kamid yihiin Nabadoon Sablaale, Nabadoon Fanax iyo nabadoone kale, nabadoonadaas ayaa sheegay inay iyagu magaalada leeyihiin, magaalada Maamulkeeda iyo amnigeeda iyaga looga danbeeyo, waxaa ay sheegeen in lagu soo duulay oo lagu haysto Magaaladooda. Sidoo kale waxaa ay sheegeen ciidankaan beesha ee magaalada jooga inay yihiin ciidankii uu ka hadlay Raisul wasaaraha Soomaaliya Dr Saacid.
Waxaa hadalka qaatay odoyaal u hadlayey Beesha Hawiye oo ay Kamid ahaayeen Aarwow, Candullahi Mohamed iyo Diirshe waxayna sheegeen in degaanka lawada degan yahay, dhibaataduna ay ka taagan tahay maliishiyo beeleed magaalada beel kamid ah beelaha magaalada degan ay kusoo aruurisay, Maliishiyadaas oo ay sheegeen inay dhibaato ku hayso bulshada degaanka, Maliishiyadaas oo doonayso inay beelaha kale ka qaado Canshuur taasoo ah wax aan la aqbali karin, waxayna cabashadooda ku gudbiyeen qoraal ay soo diyaarsadeen.
Kadibna waxaa hadalka qaatay Beesha Banaadiriga oo ay u hadleen Nabadoon Cabdi Jaylaani, Nabadoon SaalaxNabadoon Maxamuud Kuulow Aweys ayaa iyagu sheegtay inay Magaalada Marka iyagu leeyihiin dhismayaaha iyo ganacsiga Magaalada waxa lagu dagaalamayo oo la isku haystana ay tahay Hantida beesha Banaadiriga qofkii Canshuri lahaa, waxaa kale oo ay sheegeen in Saldhiga Magaalada dadka ka soo jeeda Banaadiriga micno la’aan la isaga xiro, odoyaasha ka daba tagana lawada xiro, waxaana ay sheegeen in qofkii la xiro loogu soo daayo oo kaliya lacag, arintaas oo ay sheegeen inay tahay in dawladu wax ka qabato.
Waxaa kale oo meesha ka hadlay odoyaal ka soo jeeday Beesha Digil iyo Mirifle , Nabadoonadaas oo ay ka mid ahaayeen Nabadoon Cali Shariif iyo Nabadoon Mustaf iyaga oo sheegay in dhamaan waxyaalaha ka dhacaya magaalada Marka ay masuul ka yihiin dawladda maadaama ay ahayd in marhore aysoo farageliyaan , xaliyaana arimahaan soo noqnoqday.
Shirkii shalay kadib waftiga wasiir ku xigeenka wuxuu maanta isugu yeeray dhamaan odoyaasha degaanka wuxuuna u sheegay in dawladu go’aansatay in xilalka laga qaado masuuliyiintii ku magacaawnaa magaaladaan oo dagaalada beelaha sameeyay ama qeybta ka ahaa. Waxayna xilalka ka qaadeen. Gudoomiyaha Degmada Cukaash, G/k/xigeenka Degmada Cabdisalaan, Madaxa Samafalka Marka Cabdulahi Toxob iyo Taliyaha Saldhiga Marka Xasan,
W.k/xigeenka Arrimaha gudaha wuxuu si kumeel gaar ah u magacaabay Mr Yariisoow inuu sii hayo gudoomiyaha degmada Marka, sidoo kale waxaa G/k/xigeenka arimaha Bulshada si kumeel gaar ah loogu magacaabay Baarliin Cabdullahi, waxaa kale oo uu sheegay in Gudoomiye ku xigeen xaga dhaqaalaha laga sugayo Beesha banaadiriga inay hadda u soo gudbiyaan.
Shirka intaas ayaa lagu soo gabagabeeyay iyada oo ay goob joog ka ahaayeen Taliyaha AMISOM ee gobolka, Gudoomiyaha Gobolka, Abaanduuliyaha Ciidamada qalabkasida iyo Abaanduuliyaha Gaaska Sh/hoose Gen Cageey.
Masuuliyiin ka tirsan Maamulka Janaale oo Buufoow lagu weeray.
Baabuur ay wateen Masuuliyiin ka tirsan Maamulka Janaale ayaa lagu weeraray Buufoow , dagaal muddo gaaban socday ayaa la sheegayaa inay ku dhaawacmeen Madaxii amniga degmada Janale Bashiir iyo sedex ka mida ilaaladiisa.
Gurmad ay sameeyeen Milateriga dawladda ee ku sugan Marko ayaa gaaray meesha weerarku ka dhacay iyada oo la sheegayo inay meeshaas ku dileen labo kamid ah maliishiyadii weerartay Masuuliyiintii ka timid Janaale.
Ciidanka Milatariga oo qaaday dhaawicii masuuliyiinta Janaale ayaa halkaa uga tegay Baabuurkii ay wateen masuuliyiinta ka yimid Janaale.
Maliishiyadii weerarka geysatay ayaa dib ugu soo laabatay meeshii dagaalku ka dhacay kadib markii ay ogaadeen in milatarigii ka tageen meeshaas, maliishiyaadkaas ayaa la sheegayaa inay gubeen Baabuurkii ay wateen masuuliyiinta Janaale.
Dagaalkaan aya yimid xili Masuuliyiinta Dawladda iyo taliyayaasha AMISOM iyo ciidanka Soomaaliyeed ay saakay odoyaasha degaanka Marko u sheegeen in amniga ay gacan bir ah ku qaban doonaan. Dhamaan maliishiyo beeleedyadana la xarayn doono, Milatarigii ku sugnaa gobolkana gebi ahaanba la bedeli doono.
Dagaal culus ayaa ka socda meeshii maliishiyaadku ku gubeen baabuurkii masuuliyiinta Janaale.